မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောဘုရားကွီး၏ လူတဈသိနျးကိုကြှေးရတာနဲ့ ညီမြှသညျ့ ကုသိုလျရတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနညျး – Cele Lover
မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောဘုရားကွီး၏ လူတဈသိနျးကိုကြှေးရတာနဲ့ ညီမြှသညျ့ ကုသိုလျရတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနညျး
တဈကွိမျဘုရားရှိခိုးလို့ရှိရငျ လူတဈသိနျးကြှေးရတာနဲ့ ညီမြှတဲ့ ကုသိုလျရတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနညျးရှိတယျ။ဘယျလို ဘုရားရှိခိုးမလဲဆိုတော့…မမွဲသော ဤခန်ဓာကိုယျကို ကိလသော အပူခပျသိမျးမှ ကငျးငွိမျးတျောမူပွီးသော ဘုရား တရား သံဃာအား လှူဒါနျးပါ၏ ဘုရား…(တဈကွိမျ ရှိခိုးလိုကျ)၊
ဆငျးရဲသော ဤခန်ဓာကိုယျကို ကိလသော အပူခပျသိမျးမှ ကငျးငွိမျးတျောမူပွီးသော ဘုရား တရား သံဃာအား လှူဒါနျးပါ၏ဘုရား…(တဈကွိမျ ရှိခိုးလိုကျ)၊ အစိုးမရသော ဤခန်ဓာကိုယျကို ကိလသော အပူခပျသိမျးမှ ကငျးငွိမျးတျောမူပွီးသော ဘုရား တရား သံဃာအားလှူဒါနျးပါ၏ဘုရား…(တဈကွိမျ ရှိခိုးလိုကျ)။ဤသို့အားဖွငျ့ ရတနာသုံးပါးကိုသုံးကွိမျသုံးခါ ရှိခိုးပူဇျောပါ။ အငျမတနျ အကြိုးမြားတဲ့ဘုရားရှိခိုးနညျးပါ။ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့…….
မမွဲသော မိမိခန်ဓာကိုယျကွီးကို မမွဲတဲ့အကွောငျး ပှားတာက ဝိပဿနာပါ။ (မမွဲခွငျး၊ဆငျးရဲခွငျး၊အစိုးမရခွငျး)ကိလသောမရှိတဲ့ ဘုရား ၊ ကိလသောကငျးကွောငျးဖွဈတဲ့ တရား ၊ ကိလသောကငျးပွီးတဲ့ သံဃာတှကေို အာရုံပွုတာက သမထပါ။လှူဒါနျးပါ၏ ဆိုတာက ဒါနပါ။ ဒါနရော သမထရော ဝိပဿနာရောကုသိုလျ အကုနျပါသှားတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနညျးပါ။
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ လူတစ်သိန်းကိုကျွေးရတာနဲ့ ညီမျှသည့် ကုသိုလ်ရတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနည်း
တစ်ကြိမ်ဘုရားရှိခိုးလို့ရှိရင် လူတစ်သိန်းကျွေးရတာနဲ့ ညီမျှတဲ့ ကုသိုလ်ရတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနည်းရှိတယ်။ဘယ်လို ဘုရားရှိခိုးမလဲဆိုတော့…မမြဲသော ဤခန္ဓာကိုယ်ကို ကိလေသာ အပူခပ်သိမ်းမှ ကင်းငြိမ်းတော်မူပြီးသော ဘုရား တရား သံဃာအား လှူဒါန်းပါ၏ ဘုရား…(တစ်ကြိမ် ရှိခိုးလိုက်)၊
ဆင်းရဲသော ဤခန္ဓာကိုယ်ကို ကိလေသာ အပူခပ်သိမ်းမှ ကင်းငြိမ်းတော်မူပြီးသော ဘုရား တရား သံဃာအား လှူဒါန်းပါ၏ဘုရား…(တစ်ကြိမ် ရှိခိုးလိုက်)၊ အစိုးမရသော ဤခန္ဓာကိုယ်ကို ကိလေသာ အပူခပ်သိမ်းမှ ကင်းငြိမ်းတော်မူပြီးသော ဘုရား တရား သံဃာအားလှူဒါန်းပါ၏ဘုရား…(တစ်ကြိမ် ရှိခိုးလိုက်)။ဤသို့အားဖြင့် ရတနာသုံးပါးကိုသုံးကြိမ်သုံးခါ ရှိခိုးပူဇော်ပါ။ အင်မတန် အကျိုးများတဲ့ဘုရားရှိခိုးနည်းပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့…….
မမြဲသော မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို မမြဲတဲ့အကြောင်း ပွားတာက ဝိပဿနာပါ။ (မမြဲခြင်း၊ဆင်းရဲခြင်း၊အစိုးမရခြင်း)ကိလေသာမရှိတဲ့ ဘုရား ၊ ကိလေသာကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ တရား ၊ ကိလေသာကင်းပြီးတဲ့ သံဃာတွေကို အာရုံပြုတာက သမထပါ။လှူဒါန်းပါ၏ ဆိုတာက ဒါနပါ။ ဒါနရော သမထရော ဝိပဿနာရောကုသိုလ် အကုန်ပါသွားတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနည်းပါ။
Previous Article လာဘျပှငျ့ငှဝေငျဆား၂ဆုပျအစီရငျ
Next Article ယနရေုံ့းခြိနျးမှာ ရှနေ့တှေပွေောပွတဲ့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံ၏ ကနျြးမားရအေခွအေနေ